Vohitsambo Ambalavao: tohodrano manondraka tanimbary 800 ha | NewsMada
Vohitsambo Ambalavao: tohodrano manondraka tanimbary 800 ha
Notokanana, ny 27 aogositra teo, ny fanarenana ny tohodrano any Vohitsambo, distrika Ambalavao, faritra Matsiatra Ambony. Mamaha ny olan’ny tantsaha tokoa ity fotodrafitrasa ity satria manodidina ny 800 ha ny tanimbary azony tondrahina, any amin’ny kaominina Ambohimahamasina, Ambinanindivoka ary Anjoma, ahitana fianakaviana maherin’ny 1 600.
Anisan’ny tohodrano ela indrindra any Ambalavao ity any Vohitsambo ity satria efa ho 80 taona. Mirefy 74 km ny lakandrano miainga avy ao aminy misandrahaka any amin’ny tanimbary. Nihasimba izany taty aoriana ary tsy ampy intsony ny rano, lasa nanahirana ny mpamboly. Maro ny fangatahana nataon’ny tantsaha tato anatin’ny 30 taona farany, saingy tamin’ny taona 2017 vao tanteraka izany nanombohana ny asa.
Ankoatra ny fambolem-bary, afaka manatsara sy manitatra ny fambolena hafa koa, ankehitriny, ny tantsaha, toy ny voly paraky, ny legioma sy ny anana ary ny fiompiana trondro. Fantatra fa hisy fotodrafitrasa hafa koa hatsangana any an-toerana, toy ny trano fitahirizam-bokatra, ozinina famokaran-jezika.